58 Azịza ya "rụọ Polygon dabere na ntinye na ogologo na tebụl Excel"
February, 2021 na
dee na nchịkọta akụkọ na geofumadas dot com
ka ha nye gi nkwado
Enwerem nsogbu. Mgbe m nwetara template ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma, nke ahụ dị ka afọ 4 ma ọ bụ 5 gara aga,
M ji ya na-enweghị nsogbu. Ugbu a ọ naghị arụ ọrụ maka m mgbe mado ya na Autocad. Agbalịrị m na Autocad 2013 na 2017 na ọ dịghị ihe. Amaghi m ma m ga-ahu ma nwe nkpuru, anam eji 2019. Na mbu m jiri 2016.